Maleeshiyaad kasoo horjeeda Maamulka Hir-Shabeelle oo hub aruursi bilaabay - Awdinle Online
Maleeshiyaad kasoo horjeeda Maamulka Hir-Shabeelle oo hub aruursi bilaabay
12-kii saac ee lasoo dhaafay deegaanka Ceelgaal ee dhaca qiyaastii 13-Km dhanka waqooyi ee Beledweyne waxaa buux dhaafiyay Maleeshiyaadkii ugu badnaa oo ku hubeeysay hubka nuucyadiisa kala duwan.
Saraakiil hore oo dowladdii dhexe ka mid ah oo deegaankaasi ka waday abaabul ciidamo Maleeshiyaadkaasi ayaa ka baxay wada hadal iyo Heshiis horu-dhac ah oo maalin ka hor wada gaareen iyaga iyo Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan.
Waxaa Ciidamadaasi hor kacaya Genaral Abuukar Xuud oo aad uga soo horjeeda Doorashadii Jowhar ka dhacday oo uu ku tilmaamay mid aan Cadaalad ku dhacin,waxaana laga cabsi qabaa in gudaha magaalada Beledweyne aay soo galaan maleeshiyaadka sargaalkaasi uu wato kaddibne isku dhac uu yumaado.
Illo xog ogaal ah ayaa ii xaqiijiyay in Abaabulka Ceelgaal ka socda aay geed fadhi yihiin Qurba joog ree Hiiraan ah kuwaasi dhaqaala badan ku bixinaya in Hirshabelle aaysan ka talin Hiiraan isla markaana Caleema saarka Madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen uusan Beledweyne ka dhacin.
Previous articleCullimada Ahlusunna oo ku biiray Shirka musharixiinta uga socda Muqdisho
Next articleRa’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo kormeeray xerooyin Ciidan